Yintoni eyona ndlela kuhlangana Russian icacile kuba ezinzima budlelwane. Kufuneka mna nje hamba Saserashiya. EM
Ngamanye amaxesha ndifuna ukuva ukusuka guys owathi a horrible amava kunye ahlawule-ngamnye-incwadi dating zephondo kwaye baya nimangaliswe yintoni eyona ndlela uya kuba ukuhlangabezana eligible Russian icacile. Abanye kubo wabuza kum nokuba ndicinga ukuba izakuba okulungileyo nje hamba Us ukuhlangabezana omnye girls apho. Masithi nje shiya Us yedwa kuba ngexesha elifutshane. Masithi nje uthethe malunga marrying a elonyuliweyo ukusuka kweyenu lizwe. Kufuneka ahlangane enye umntu, abo ngethemba kanjalo anomdla settling phantsi kwaye iqala usapho, kwaye kwangoko nokwakha budlelwane, propose kwaye cwangcisa wedding umhla. Ucinga ukuba ingaba kufuneka ukususa ezinye ezikhethekileyo indawo ngaphakathi ilizwe lakho ukuba wenze oko. Hayi, kufuneka nje ufuna ukufumana ilungelo umntu angenza isigqibo apho ufaka oza kuhlala, ukuba akunjalo, enye isixeko. Ukuba ufuna enye isixeko, kufuneka ukuba zeziphi indawo suits wena kunye ngcono. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba kuhlangana ilungelo umntu. Kwaye ke engathndwayo ukuba kunokwenzeka ukuba ufuna nje yiya kwindawo ethile isixeko kuba utyelelo. Icacile kuwe, akunjalo. Akunyanzelekanga na okuninzi ke tourist. Ukuba nantoni na, kufuneka disadvantages. Uvumelekile ukuba kummandla nje ixeshana elifutshane kwaye females ingaba wary nokuba ufaka nje ezama ekhawulezayo hook-phezulu, kunjalo, ukuba bamele ikhangela into ezinzima. I-okkt abakhoyo ikhangela ekhawulezayo hook-phezulu, baya kuba KULUNGILE nge tourist. Uyabona, icacile kuwe xa usebenzisa ukucinga eyakho lizwe. Kodwa xa ufuna ukucinga malunga ne-Russia, ngesiquphe ucinga ukuba umtshato-minded females (ingakumbi umtshato-minded ladies abakhoyo eager ukuba uyeke yonke into kwaye yiya kwelinye ilizwe) ingaba uyasebenza jikelele njenge wild zasendle kwi-Russian izixeko. Eneneni, ukuba ngaba kwakukho ucinga ngoko ke, ubuya kuba kunjalo, ngenxa yokuba kukho akukho wild zasendle kwi-Russian izixeko. Kwaye kukho akukho isigebenga hordes ka-Russian females wanting enye foreigners noba. Nkqu uyise ukuba elahlukileyo karhulumente okanye isixeko ngaphakathi efanayo lizwe yi enkulu inyathelo lesi-kuba uninzi abantu. Indlela enkulu ngu utshintsho kuba umntu ukusa ku-a lizwe apho abantu kuthetha ezahlukeneyo zolwimi, ucinga ukuba. Ndiyazi ukuba abantu abaninzi abahlala yokuqala yehlabathi amazwe bakholelwa ukuba foreigners esuka ngaphantsi kwaphuhliswa states ndijonge phambili ku-immigrate apho. Kodwa ke ayisosine inyaniso. Ukuba ufuna travelled kakhulu, ubuya kwazi ukuba abantu jikelele uthando lwabo amazwe kwaye wouldn ayikwazi ukwahlula ufuna ukusa ngaphesheya. Ngaphandle, kunjalo, kukho imfazwe kwi-nelizwe labo ubomi babo zi ku umngcipheko. Kule meko zisenokuba izigidi refugees, njengoko sibona kwi abaninzi kwiindawo Kumbindi Mpuma okanye e-Afrika. Ngoko ke, ukuba ucinga ukuba utyelelo ukuba Us kuyenza lula kuwe ukuhlangabezana umtshato-minded Russian icacile, ngokuqinisekileyo uphumelele khange. Ukwenza oko, ngaba ngokwenene kufuneka hayi nje ndwendwela kodwa yiya phaya ukuze siphile. Ngoko uza kuba efanayo okuninzi njengoko Russian guys, abo bathe iinkcukacha ezibalulekileyo zelizwe kwaye yenkcubeko paradigms kwi zabo icala. Basically, yonke enye Russian females ingaba umtshato-minded. Umtshato ingaba intsingiselo ebomini kuba nabo. Bathe baba bazisiwe phezulu ukuze intsingiselo ebomini kuba ibhinqa ngu ukufumana watshata, kuba abantwana kwaye nyusa usapho. Baya absolutely kukholelwa ke inyaniso. Ke inyaniso kuba nabo. Kodwa baninzi uninzi Russian icacile, njengoko nditshilo, musa ufuna ukusa kwelinye ilizwe. Baya kuba kakhulu vala kwaye ziqinile usapho ties kwaye wouldn ukuba ufuna ukushiya iintsapho zabo. Kubalulekile kuphela kakhulu elilungileyo eliphantsi ipesenti omnye females, jikelele omnye okanye ngaphantsi, abathi maxa cinga a ubudlelwane kunye langaphandle umntu. Nkqu nokuba bathe kakhulu abancinane ithuba ukuhlangabezana umntu kowabo homeland, ngenxa iinkcukacha ezibalulekileyo zelizwe, baya? musa abanqwenela cinga dating umntu abo ubomi kwelinye ilizwe. Esinye isizathu kuba oko kukuthi propaganda. Ukuba uthetha rhoqo Russian abantu malunga ngamazwe marriages, baya kukuxelela ngqo kude:”ke ombi. I-mentality kakhulu ezahluka-hlukileyo.”Mhlawumbi baya uphumelele uyixelele kwenu njengokuba foreigner (ngenxa yokuba kuya kuba besoyika ukuba ukhathaza kuni), kodwa abazange bathethe ngamnye enye malunga nayo, ukuba iinqwelo husbands kuphela kufuna Russian nabafazi ukuxhaphaze kwaye mistreat kwabo. Ezinjalo zenza umfanekiso apeyintwa yi Russian media kwi-umzamo yima wobulali girls ukusuka marrying foreigners kwaye ngaphesheya. Ewe, kunjalo, propaganda umatshini ngu portraying izinto ngendlela engalunganga ukukhanya kwi-injongo, kodwa abantu bakholelwe into bebona kwi-TV. Oomama wam-Russian abahlobo watshata ukuba Australians ngokuba nabo kwindawo ephakathi busuku babuze ukuba babeza ngenene KULUNGILE kwaye hayi nje pretending, emva kokuba ukubukela i-enjalo TV lwenkqubo. I-oomama baba ngoko ke terrified, babecinga ukuba le abafazi lied ukuba bahlala ke, ngenxa yokuba baye baba noloyiko ye-indoda yakhe. Seriously. Nantsi into yokuba bonisa kumgca-Russian-TV. Ngoko ke, ke idla kuphela ladies abo ukwazi umntu ubuqu abo watshata a foreigner kwaye bafudukela ngaphesheya ukuba wenze isigqibo cinga ngolo khetho. Uninzi bonke kwi-Russia kubaluleke kakhulu suspicious malunga marriages ka-foreigners kwi-Russian icacile jikelele notion kukuba females uphumelele khange abe ekhuselekile enjalo umtshato. Oku omnye umbandela ubungqina engqondweni xa ucinga ka-utyelelo ukuba Us njengoko indlela kuhlangana a enokwenzeka iqabane lakho. Uvumelekile ukuba ngenene bhetele ngaphandle kuqala ukunxulumana kunye umntu lowo ucinga ukuba ufumana ezilungele kwaye ke intlanganiso yayo kwi-Us. Ukuba oku akuthethi ukuba umsebenzi, ngoko ukwazi baqonde lakho lokuqala icebo nje touring Us kunye imboniselo ukuhlangabezana a iqabane lakho kuba budlelwane. Kodwa kufuneka ubuncinane amahlanu-amahlanu ithuba ukuba kuya kusebenza. Ngaphandle, emva uthetha ukuba elonyuliweyo kuba kwiiveki ezimbalwa, wena iya kuba kuqala-isandla amava dating a Russian wasetyhini kwaye iimpendulo imibuzo ukuba ubufuna ukwazi malunga ubomi kwi-Russia, inkcubeko, njalo njalo na ofuna kuba iimpendulo. Ayonto olu lwazi kukunceda kakhulu into. Ngoko ke, ngaba abakho yokulahla nantoni na ukuba ufuna kuqala qala uthetha ukuba Russian icacile kwi-intanethi. Kodwa nibe nokuphumelela kwaye zenze ubomi bakho indlela lula ukuba unqwenela ukuya kuhlangana umntu umtshato-minded, ngenxa ayithethi ukuba iindleko kuwe nantoni na ukuba incoko, i-intanethi kunye abafazi ukusuka Elena models. Kwaye unako ngokuqinisekileyo ngaphandle kwenu kakhulu imali kwaye nokuchithakalela phulo njengoko kuthelekiswa ngokulula ke Us kwaye uzama ukuhlangabezana icacile abakhoyo vula ukuba emigrating kwaye kanjalo uya kuba nako trust i-tourist ukuba akanguye nje emva ekhawulezayo hook-phezulu. U-imibuzo malunga relocation: yakho amava. Kukangakanani kwenzeka ntoni le guy ukutshintsha indawo, kwaye emigrate kwi-i-FSU lizwe, emva yokufumana watshata. Kukho a inyaniso a Slavic kubekho inkqubela yamkela a imibuzo ukutshintsha”ekhaya”. Ndithetha xa oko kukuthi cacisa ukuba yena efumana watshata kunye guy, baya tshintsha izixeko, kwaye amazwe mhlawumbi amaxesha aliqela ngonyaka. (Umzekelo, omnye ngonyaka-Austria, nesiqingatha kwi-Indiana, kwikota kwi-ANNIESART, kwikota kwi-Malaysia, njl. njl.) Urobert, ndenze nika personal iintlanganiso zokubonisana ukuba ufuna omnye.
Mna ikhangelwe kanye ngofebruwari (kwakhona ngoku). Ukuba kwindawo yakho ezininzi ezinzima kwaye bomgangatho inkonzo. Ingaba personal luhlomle kuwo ezikhoyo, ukuba shoddy akazange isicwangciso ukuya phambili bangena personal matchmaking. (Kwaye ukuba – a- h prep ixesha, shwankathela kwi amathathu ubuncinane kakhulu babefuna imimandla.) Opheleleyo matchmaking lwenkqubo izandi kuba kum ultimate yokugqibela (best) ithuba xa yonke enye indlela ayiphumelelanga. Kwaye endleleni kufuna iyonke ugqaliso, apho unako akakho enye ixesha: umsebenzi, okanye uphando, okanye iiprojekthi, okanye imisetyenzana yokuzonwabisa. Andinguye ilungele ukuba. Urobert, bazalwana personal luhlomle kuwo iyafumaneka kuba imali kusenokuba booked nge-site, ikhonkco ngasentla. Elena, ndinqwenela ukwenza ezimbini kwimpendulo eli nqaku. Ndine bafudukela ixeshana elifutshane ukuze Kirov kwaye ndim intlanganiso Russian abafazi yi – engaging kwi-everyday imisebenzi. Umzekelo, ndandidibana ezintathu ezahlukeneyo omnye Russian abafazi nje njengesiphumo yokufumana wam kakhulu owakhe wobulali library ikhadi kunye wam photo kuyo. Mna kuba kanjalo uqaphele ukuba Russians ingaba kakhulu eyobuhlobo kodwa ephikisana i-american stereotyped inkcazelo friendliness, Russians kuphela kufuneka modicum ka-ekuthetheni. Ewe, baya musa enyanisweni ncuma kwi-wonke kwaye ewe, babe uqhankqalazo kuwe njengoko yingqele kwaye Ukufunda ngakumbi”Roger, ukuba ufuna isicwangciso ukuphila kwi-Russia, ewe. Ukuba ufuna musa isicwangciso ukuphila kwi-Russia, kodwa ngokulula makhaya, ngoko ke Us hoping ukuhlangabezana umfazi abo baya kuvuma ukuba kuba umfazi wakho kwaye yiya ngaphesheya nani, xa ngaba kukho njengokuba tourist, ngu ezahlukeneyo ibali kwaye elahlukileyo ucwangciso. Wam incopho ufumana abantu abahlala ngaphesheya uya kuba kakhulu bhetele ngaphandle ngokulula uthetha ukuba imiceli-Russian icacile wanting kwaye uzimisele ukuhamba ngaphesheya ngokusisigxina, othetha isingesi, ukufumana phandle ngakumbi kwaye sifunde indlela zithungelana kunye abafazi abanjalo, ngexesha ekubeni ngxi ngowe-Funda okungakumbi”Lento kusoloko okulungileyo cinga. Ndicinga ukuba eli nqaku kuxhaphakile evakalayo, kodwa kulula kuba abantu ukuba wenze mpazamo ka-ukucinga ngenye indlela. Oku elinye icebiso uza kufumana ukusuka abantu abathe amava ingxowa-zabo uthando ngaphesheya. Emva zonke, ingavumi ngcono enye umntu lowo uthanda zabo inkcubeko kwaye unako share kuyo kunye nawe. Absorbing entsha inkcubeko yi emangalisayo indlela ukukhula. Kanjalo, ke kunokwenzeka ukuba uthando ezimbini amazwe (okanye ezintathu.). Heee Elena, ndiyaqonda yonke into kuwe wathi apha, kodwa ke kwenzeka njani babebaninzi kakhulu Russian abafazi-abavela kumazwe angaphandle amadoda encounters budlelwane nabanye ngethuba nje FIFA. Loo makhaya ifeni baba kanjalo abakhenkethi, kodwa ngokunxulumene ezahlukeneyo iindaba imithombo kwakukho AMANQAKU ka-couples bamisela ngexesha indebe yehlabathi, kwaye ngokunxulumene i-RT amazibuko ka-kanye Russian abafazi baba VULA ukuba ekubeni ubudlelwane makhaya langaphandle ifeni. Oku EPHIKISANA yakho inani elingama-ngaphantsi kwe -“nje”- Russian abafazi. Kulo lonke ezahlukeneyo iindaba imithombo kwaye eyewitnesses, wenziwe IQINISEKISWA okokuba kwabakho ILANLEKILE YE MINGLING kunye langaphandle Ukufunda ngakumbi”- Adam, iziganeko Zehlabathi Indebe kwakukho abanye frenzy a iqela. Alikwazi ukwahlula eyenzekayo namhlanje, ukuba sihamba Saserashiya. Akunyanzelekanga ukuba ingqondo yakho nje ukuthenga i-ticket kwaye behamba. Mna nje kuthi ke stupid yokuchitha le mali, xa ungakwazi ngokulula ukhangele iinketho kwaye budlelwane kwi-intanethi xa usahlala ekhaya, kuba nje dollazi. Funda malunga abafazi, babo amaxabiso, yeyiphi imiceli-Russian abafazi ingaba ngenene ngathi. Ukufumana phandle zabo amaphupha kwaye umnqweno, kutheni bamele bakwenze oko ukwenzayo. Ukufumana ezinye amava. Xa ukhethe ngokomgaqo-qhagamshelana ne-umntu kwaye ukuba kufuneka Ukufunda ngakumbi”ndiyaqonda yonke into. Ngoko ke basically, oko kuthetha nani, ukuba Russian kwakukho abafazi kuphela vula ukuba beka phantsi ngaphandle kunye foreigners ngexesha indebe yehlabathi, akunjalo. Ngoko ke, ukuba foreigner utyelelo Russia xa kukho AKUKHO world cup, lowo uzofikela wamanzi acociweyo negativity ngomoya wobulali Russian abafazi. Ngoko ke, nantsi into nisolko uzama ukuthi, ndiyaqonda ndingumntu abo ubomi ubomi kwi LOGIC. Logic yiyo YONKE into kum. Ngoko ke basically, foreigner kuphela”nabafana”kwi-Russian kubekho inkqubela ukuba abe sele a FAN ID jikelele yakhe neck.
A foreigner NGAPHANDLE a fan i-ID, ngaphandle name Jersey ngu-Funda okungakumbi”- Adam, yakho logic ngu zamangalisa. Akunyanzelekanga ukuba ngathi arguing kunye abantu, ndithanda agreeing kunye nabo. Ukuba ke, apparently, exabisekileyo kakhulu umgangatho kwi-umfazi. (Funda namhlanje ke ngeposi.) Yintoni ndinguye esithi yakho imithombo ingaba rubbish. Kukho kokuba zange sele ukuba”enkulu utsalekoname”foreigners kwi-Russian abafazi ngexesha Indebe Yehlabathi njengokuba ufunda sicatshulwa. Kwaba mhlawumbi ngaphantsi guys onqwenela ukufumana kulo naliphi na ilizwe ngexesha enjalo isiganeko, kwaye kwaba efanayo uhlobo girls ukuba ingaba beka phantsi jikelele visitors ukusuka kwelinye ilizwe. Iimposiso ngokwaneleyo. Lonke ibali malunga umdla omkhulu ukusuka Ukufunda ngakumbi”Kodwa baye kanjalo yabonisa ILANLEKILE ka-Russian girls kwi-interviews, ababe hanging ngomgca foreigners. Ingakumbi ezininzi iindaba reporters kwi-central Moscow zifunyenweyo ngoko ke ezininzi ezifana couples, kwaye nkqu udliwano-ndlebe nabo. Benza udliwano-ndlebe ngoko ke, abaninzi young Russian girls kwi kuphila I-TV YouTube ngexesha downtown Moscow, kwaye girls elubala wachaza zabo utsalekoname kuba Arab kwaye Mexican Latin abantu. I-reporter ke bloggers nkqu zifunyenweyo ngoko ke ezininzi ezifana couples hanging jikelele central Moscow udliwano-ndlebe nabo, abo Russian girls baba ngaphezu ninoyolo ukuba ingaba scored Mexican Arab boyfriends. Ndisibonile yonke lonto. Kwaye yintoni wena esithi malunga ne-Russian abafazi ekubeni threatened Ukufunda ngakumbi”
← Familiarity kunye Mexico
Ezine Eyona kwi-Intanethi Dating Zephondo kwi-Mexico Visa Hunter →